हाम्रो समाजबाट विकृति लाई हटाउनु पर्छ
अहिलेको यो आधुनिक युगमा हाम्रो समाजलाई अन्धकार तिर जादै हेर्दा कसलाई चित न दुख्दै होला ? हामी त्यो समाजमा छौँ जहाँ एउटा्ले अर्को मार्ने काम गर्छ । हामि बुझन सक्छौ समाजमा अहिले विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखा पर्दैछ, उदाहरण हामीसंग प्रसस्त छ, जस्तै बाल मजदुरी रमाउने र भविष्य बनाउने उमेरमा मजदुरी गरेर आफ्नो जिन्दगी चलाउछ, के यो हाम्रो समाज को विकृति हैन र ?
दाइजो प्रथा, महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता घृणात्मक क्रियाकलापहरु हाम्रो समाजमा देखा पर्छ । यस्तो कुनै दिन न होला जुन दिन बलात्कार नभएको सुन्न पाइएको छैन । कहिलेसम्म हाम्रो दिदी बहिनी छोरी सिकार बन्ने छ ? उस्को पीडा हेरेर लाज लाग्दैन ? दैनिक बलात्कार बददै गइरहेको छ, यो के हो ?
हामी जे कुरामा नि सरकारलाई नै दोष दिने गर्छौ, कहिले सोच्दैनौ हामिले देशको लागि के भुमीका निर्वाह गर्नु पर्दछ । जहिले नि आफ्नो गल्तीको दोष अरुलाई दिन्छौ । के बलात्कारिलाई सरकारले पाल्ने गर्छ ? पक्कै पनि हैन होला, हाम्रै समाजबाट कोहि बलात्कारका सिकार बन्छ र बनाउने पनि हाम्रै समाजको कोहि हुन्छ । सबै कुरा वा काम सरकार या अरु कोहिले गर्दिने होइन, हाम्रो पनि केहि भुमिका छ । जबसम्म यो कुरालाई मनन गर्न सक्दैनौं तब सम्म हाम्रो समाज सहि बाटोमा जान सक्दैन । छोरी, केटी (महिला) हेपेर, कोठा भित्र दबाएर राख्छौ अनि अधिकारको कुरा गर्न लाज लाग्दैन ?
एउटाले अर्कोको खुसी हेर्न चाहदैन हाम्रो समाजमा त्यसैले त हामी अरु देशको तुलनामा धेरै पछाडि छौँ । खैर विगतको कुरा छोडौं, के हामी युवा वर्ग हाम्रो कर्तव्य इमानदारीताका साथ निर्वाह गर्दैछौं ? कहिले सम्म हामी यसरी नै मौन बस्ने त ? आउदो पुस्ताको लागि असल नागरिकको रुपमा हामि सवै चिनिन पाउनु पर्यो । आउनोस अब सबैजना एक जुट भएर अन्याय विरुद्धको लडाइँ लडौं । समाजको विकृतिलाई दुर भगाऔं । आ–आफ्नो स्थानबाट देशको लागि केही राम्रो गर्ने उद्देश्य लिए मात्र आउँदो समयमा नयाँ नेपाल हामि हेर्न पाउने छौं । देशलाई स्मृद्व, सक्षम र शान्ति बनाएर राखौं ।
जउबा संघको मतगणना अन्यौलमा, बाहिर विरोध र प्रहरीको लाठीचार्ज
जनमत पार्टी नेपालको प्रथम महाधिवेशन जनकपुरधाममा जारी
व्यापारी आफनो नेता चयन गर्न जउबा संघमा मतदान गर्दै
श्री नगर डिहवार स्थानको छत निर्माण कार्य सुरु
जनकपुरधामबाटै सुरु भयो बाल हेल्पलाईन सेवा, १०९८ मा कल गरि मद्दत लिन सकिने
घाँस काटन गएकी महोतरीकी आठ युवती वेपत्ता, घर नफर्किएपछि स्थायिनमा त्रास
नेपाल र रावललाई पार्टी सदस्यताबाट निलम्बनको निर्णय, नेपालले भने लडन तयार हउँ
रेशम चौधरी छोडने गरि सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन
डा. भट्टराई र नेपालको मन्त्री परिषदको निर्णय झिकाउन स्र्वोच्चको आदेश
तराई मधेशमा आज होली धुमधामका साथ मनाइदै